साम्राज्ञीलाई गाउँले भुमिकामा कस्तो देखियो ? « Mazzako Online
साम्राज्ञीलाई गाउँले भुमिकामा कस्तो देखियो ?
नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह अहिलेकी हट र मस्ट डिमान्डेड नायिका हुन्। डेब्यु चलचित्र ड्रिम्स र अनमोल केसीको साथ उनलाई मजाले फाप्यो। उनी फिल्मलाई बोक्न सक्ने नायिकामा पर्छिन्। उनका चलचित्र दर्शकका लागि प्रतिक्षित हुने गर्छन्। साम्राज्ञी यतिबेला अशोक शर्माको चलचित्र रातो टिका निधारमामा काम गर्दै छिन्।
उनी पहिलो पटक चलचित्रमा गाउँले भूमिकामा देखिदै छिन्। साम्राज्ञीले गाउँले भूमिका नगर्ने भन्ने खालको हल्ला पनि आएका थिए र उनी आलोचित पनि भएकी थिइन्। त्यसैले पनि होला उनी यो चलचित्रमा काम गर्न राजी भएको। नारी सशक्तिकरणको कथामा बन्न लागेको चलचित्रमा आफ्नो भूमिका निकै कन्भिन्सिङ्ग रहेको बताएकी साम्राज्ञी एउटा सामान्य गाउले नारीको भूमिकामा देखिदै छिन्।
ईष्टाग्राम क्रेजी उनी आफ्ना बिभिन्न भेषका तस्बिर ईन्टाग्राममा सेयर गरिरहेकी छिन् जुनमा साच्चै नै उनलाई नायिका नभई सामान्य नारी नै देखिएको छ। उनी आफ्नो लुक्स र भूमिकालाई लिएर निकै उत्साहित रहेको उनका ईन्टाग्रामका फोटो र स्टोरीले बताउछ। साम्राज्ञीका लागि पक्कै यो नयाँ अनुभव हुन सक्छ र त उनी खुबै रमाईरहेकी छिन्।
कलाकार भएपछि भर्साटायल हुनपर्छ बताउने साम्राज्ञी आफुलाई भर्साटायल देखाउन गाउँले भुमिकामा पनि काम गर्दै छिन् र उनलाई सो भूमिका पक्कै सुहाएको हुनपर्छ ।